Imfundo kumele ilethe uguquko ekucabangeni - Bayede News
Amakhwenkwe esabisa ukusoka ngenkani ngalo Zibandlela
Kuphele inyanga hhayi imikhankaso yabesifazane
Usuphenduke ugoqanyawo wabesifazane uMthwalume
Ibhasi lithathwe umfundi umshayeli esaminya ubhiya
Ithemba lempumelelo oSuthwini kule sizini
Isizoba sesithe inkulumompikiswano yabeDA
Ongoti bayathimula ngohlelomnotho lukaMengameli uRamaphosa
Ukuquzana kwabo kungababishisa bobabili uZuma noZondo
Intokazi yaseMzimkhulu ibona isingalihola iqembu
Kubhoke inkemane yesicoco sePSL KwaZulu-Natal
Ikhansela lisola uzakwabo ngokulisenga imali yezingane
OwamaKhomanisi uthi abakaKhongolose kufanele balindele ukutabalasa
Umsindo ngokusebenza kwegama laMambazo
Zithelana ngodaka: UMphathiswa udiza ngamathenda oMnyango
Uguquko lukaHulumeni lugcina luyizindleko ezichaphazela ibhizinisi
Sekusele iminyaka elishumi sifike kowezi-2030
Kubalulekile ukubuka izigaba zempilo yebhizinisi
Ugwayi wumkhiqizo ongaphelelwa ngamandla
Bathi uNtuli uginge indlovu eMtubatuba
Imibhikisho iveza obala inkohlakalo kuMasipala Ingquza
Sekuzoqala isigaba sokuthungatha uMehluleli Omkhulu
INkantolo Enkulu inqume ukuba iqembu i-ANC likhokhele inkampani izigidi
Ukuzitapela kuma-akhawunti kwanqindwa yiNkantolo Enkulu
Umyalezo oqinile oya kwabesifazane ngezinsana
Ukukhuluphala ngokweqile kuyingozi engaholela ekufeni
Intela nezibonelelo manje nakudala kuleli
Zindala zombili phakathi kwezikaMsholozi noZondo
KwaSizabantu, engakubona nengikwaziyo
AboHlanga bangenza lukhulu behlangene ngezamabhizinisi
Izinduna zisalila ngesethembiso sikaHulumeni samaholo seminyaka
Imibungazo yeNhlangano Yezizwe mayingayilibali i-Afrika
UKhongolose ukhongela ubunye nokuthula
Ikhekhe likashizi elingabhakiwe
Ukubhaka ngaphandle kukaflawa
Ukudla okulula ukukwenza lapho unezivakashi
UNgema nomlando womzabalazo waboHlanga eshashalazini
AbanjengoLanga bayinsingo yokuzisika izinsumpa
Ukuhlatshwa kwenkomo kwenganyelwa abomndeni
Owesibhuda ufisa ukudedela abanye ngendondo yokugcina
Eyabaqeqeshi kuSundowns ingadala izinkinga ngomuso
Ukuba nesikwati esanele kungasiza iqembu lingabambi liyeka
Isiqomile: IPSL igcine ikhethe kwaMultiChoice
Home » Imfundo kumele ilethe uguquko ekucabangeni
Imfundo kumele ilethe uguquko ekucabangeni
by nguSanele Gamede
UMnu uSanele Gamede: UMqeqeshi WezeMpilo Yabantu Abasha Nezemisebenzi
KwaboHlanga abaningi imfundo iyinto eyigugu kakhulu. Ngingomunye wabaziqhenyayo ngethuba le mfundo engiyitholile, ikakhulu ngemuva kokungaphumeleli umatikuletsheni kuqala okwadala ukuthi ngibuyele ngenze ibanga lesishiyagalombili, lesishiyagalolunye kanye nebanga leshumi kabili.
Kwabaningi boHlanga imfundo ihlulekile ukuba ukhiye womnyango oya empumelelweni. Lokhu kwenze ukuthi baphelelwa ngamandla kanye nethemba okwenze imfundo yabukeka ngenye indlela.
Angeke ngabasola abathi imfundo ihlulekile ukuba ukhiye empilweni yabo, ikakhulu kulesi sikhathi samanje lapho inkohlakalo ithe chithi saka kulo lonke laku leli.
Njengomkhuthazi nomeluleki wabantu abasha ngempilo kanye nezemfundo, kubuhlungu ukubona aboHlanga bencela izithupha ngenxa yokungaqondisisi ukuthi isho ukuthini imfundo.
Ekuchitheni isikhathi esiningi ngeluleka abantu, ikakhulu intsha, ngemikhakha yemisebenzi, ezemfundo nokufunwa kwemisebenzi, ngifunde lokhu okulandelayo ngemfundo:
Imfundo isenguwo ukhiye wokuvula iminyango yempumelelo kodwa idinga wazi ukuthi ukhiye wokuqala nguwe. Abantu abaningi bayahlupheka befundile ngoba bengazi ukuthi imfundo yenzelwe ukukuvula amehlo ukuze ukwazi ukubona amathuba empilweni.
Lokhu kusho ukuthi noma ngabe ufunde waze wagogoda, uma uhluleke ukusebenzisa ingqondo, ngeke yakusiza imfundo. Imfundo yenzelwe ukwengeza amakhono nokukusiza ukuthi ukwazi ukucabanga kangcono, okuyinto ozelwe nayo. Lokhu kusho ukuthi imfundo angeke yakuvulela amathuba ungakasukumi phansi wazivulela amathuba ngayo.
Ngike ngeluleka udadewethu ofundele ukuba usonhlalakahle, ekhala ngokwentuleka kwamathuba omsebenzi yosonhlalakahle. Enkulumweni yethu ngathola ukuthi ufana nabantu abasha abaningi abangasebenzi kuleli. Iningi labo likhala ngamathuba omsebenzi kodwa alikwazi ukusebenza.
Iningi labantu licabanga ukuthi kumele uze uqashwe ngumlungu ukuze usebenze kanti ukuqashwa kuza kamuva. Into ebalulekile ukwazi umsebenzi futhi uwenze.
Uma ngimbuza ukuthi yini ukuba wusonhlalakahle, ngafica ukuthi akazi ukuthi umsebenzi wakhe ukwelekelela abantu kanye nemindeni ukuze bakwazi ukubhekana nezinkinga abahlangabenzana nazo kanye nokwenza ngcono impilo yabantu emphakathini.
Wavumela phezulu uma ngimkhumbuza, ngase ngiyambuza ukuthi abantu bahleli kahle yini ngakubo njengoba ewusonhlalakahle? Wathi cha! Ngathi kuye impumelelo yakho nokuqashwa kwakho akwenziwa ukuntuleka kwamathuba omsebenzi kodwa ukwazi ukuthi iyini le mfundo onayo.
Isakhiwo sesikhashana asingabi esaphakade
Imfundo akulona leli phepha onikwa lona uma kwethweswa iziqu. Lelo phepha liyisiqinisekiso sokuthi uwufundele umsebenzi othize kanye nokuthi ufundisiwe amakhono athize.
Umuntu ofundele ikhono elithize umbona ngokuthi asebenze, kube khona into ayenzayo hhayi ukuthwala iziqu ekhanda uhambe uchomela abantu ukuthi ufundile. Imfundo kumele ilethe uguquko endleleni ocabanga ngayo futhi nowenza ngayo izinto.
Umbuzo omkhulu engiye ngibe nawo uthi “imfundo enjani lena eyenza ukuthi uma usufundile bese awusakwazi ukucabanga kanye nokuzithuthukisa wena?” Kukhanya bha kimi ukuthi abaningi bazimisele ukudlalwa abelungu noma sebefundile bathola amakhono.
Okusemqoka ukuthi owoHlanga akumele ngabe usadlalwa abelungu noma esefundile. Isikhathi sokuthi owoHlanga azakhele yena amathuba ngemfundo ayitholile.
Kuyihlazo ukuhlupheka ufundile, ingakho kubalulekile ukuthi wonke umuntu asukume abe yingxenye yabantu abakha amathuba kunokuthi acele amathuba. Iningi lethu sizelwe nawo amakhono athize, okubalulekile ukuthi siwacije ngayo imfundo ukuze siphumelele.
nguSanele Gamede Sep 18, 2020
Sesidlulelwe isikhathi esisemthethweni sisemakhazeni isidumbu sikamalugaju
Inhlekelele: Ukuhoxa kukaZondo kungazikisa ezobulungiswa kuleli
Siyabonga ngokufunda iBayede.
Zakhele i-akhawunti yamahhala noma faka imininingwane
yakho uqhubeke ufunde.
Bheka izindlela zokukhokha ongakhetha kuzo.